Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2011 April 09
09 Avrily 2011
Tantara tamin'ny 09 Avrily 2011
Muhammad Bakr Radwan: Ejiptiana Iray Mafana Fo Voatàna Any Siria
Syria09 Avrily 2011
Radwan dia mizaka zonm-pirenena Ejiptiana-Amerikana izay tena nazoto tamin'ireo hetsika tany Ejipta, niray hina tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany Tahrir nandritra ireo andro taorian'ny #Jan25 ary nitatitra ireo vaovao mikasika an'i Siria sy ireo fikomiana Arabo ao amin'ny kaonty Twitter sy Facebook-ny.
Bahrain: Nosamborina i “Emoodz”, mpitoraka blaogy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Avrily 2011
Tamin'ny faha 30 Martsa 2011, dia nosamborina ilay mpitoraka blaogy teratany Bahraini Mohamed El-Maskati, fantatry ny olona bebe kokoa amin'ny anarana hoe "Emoodz" eo amin'ny tontolon'ny blaogy. Raha araka ny hevitry ny 'Reporters sans frontières', ny fisamborana an'i El-Maskati dia niseho taorian'ny fandrahonana tao amin'ny Twitter izay nataon'ny olona iray...
Maraoka : Ambarao ny Hevitrao ho an'ny Fanovana, ao amin'ny Twitter
Nitondra firehetam-po ho amin'ny fanovana ny lohataona Arabo. Satria efa manomboka mianjera ny rindrin'ny tahotra, mahatsiaro feno herim-po ny vahoaka ka nanomboka nandray an-tànana ny olany.Ao Maroc, iray amin'ireo lohahevitra lehiben'ny fanovàna ny fanabeazana. Houda C. (@Houdac), vehivavy bilaogera miteny frantsay, no nanomboka ny adihevitra tao amin'ny Twitter.
Amerika Latina09 Avrily 2011
2 Aprily, 29 taona aty aoriana, nanamarika ny fiantombohan'ilay ady teo amin'ny Arzantina sy ny Royaume-Uni (Angletera). Nanome voninahitra ireo maherifony lavo an'ady ny teratany ao Arzantina.